Madaxweynihii Galmudug oo xilkiisii madaxweynenimo si Rasmi ah ugu warejiyey madaxweynaha cusub ee Mohamud Abdi Colmi (Tima kalajeex). | Somalisan.com Home
Madaxweynihii Galmudug oo xilkiisii madaxweynenimo si Rasmi ah ugu warejiyey madaxweynaha cusub ee Mohamud Abdi Colmi (Tima kalajeex). 11/12/2012 8:17:00 Dhoolatuska ay sameeyeen Ciidamadda taabacsan Madaxweynaha xilka la wareegay iyo Madaxweynahii xilka wareejiyay ayaa la rumeeysan yahay in deb ridkoodu ahaa dhoolatus ay ku muujinayaan awoodooda Ciidan taas oo argagax gelisay Hogaamiye kooxeedka Abdi Hassan Cawale Qaybdiid oo mar sheegtay inuu yahay Madaxweynaha is doortay ee Galmudug State. Dhawaqa rasaasta hubka nuucyadiisa kala duwan ayaa ruxay Magaaladda Galkacyo 11 November 2012 ,saacadu markey ahayd 4:30 Galabnimo,kadib markii Madaxweynahii hore ee Galmudug Mohamed Ahmed Caalin uu ku dhawaaqay inuu xilka si rasmiya ugu wareejiyay Madaxweynaha cusub ee Galmudug Mohamud Abdi (Tima kalajeex). Rasaasta dhaceysay waxaa ridayay Ciidamo taabacsan Madaxweynaha cusub ee Galmudug kuwaas oo ku faraxsanaa in loo caleemasaaray Madaxweynenimada Galmudug .
Magaalada Galkacyo oo laba u qeybsan waxaa dhinaca Koofurta Wadooyinka waxaa isugu soo baxay Gaadiidka Dagaalka,Ciidamo hubeeysan iyo Dad rayida oo dabaaldeg u sameeynayay Madaxweyne Mohamud Abdi (Tima kalajeex). Dad badan oo ku nool Koofurta Galkacyo ayaa ka argagaxay gurxanka rasaasta jiho walba laga riday maxaa yeelay gobolka ay ku nool yihiin ee Mudug loogama baran in rasaasta dabaaldeg loo rido.
Caruur iyo haween warmooga ayaa guryahooda gabaad ka dhigtay halka bulshada degta Waqooyiga Galkacyo qiyaasteen inuu dagaal ka dhex qarxay Siyaasiyiin tan iyo bishii Augosto 2012 isku heystay Madaxweynenimada Galmudug . Dad badan oo colaada neceb ayey neef weyn ka soo fuqday markii Rasaastii ruxday Galkacyo ee la moodayay dagaal ,noqotay mid loogu dabaaldegayay caleemasaarka Madaxweynaha cusub ee Galmudug Dr Tima kalajeex.
Dhoolatuska ay sameeyeen Ciidamadda taabacsan Madaxweynaha xilka la wareegay iyo Madaxweynahii xilka wareejiyay ayaa la rumeeysan yahay in deb ridkoodu ahaa dhoolatus ay ku muujinayaan awoodooda Ciidan taas oo argagax gelisay Hogaamiye kooxeedka Abdi Hassan Cawale Qaybdiid oo mar sheegtay inuu yahay Madaxweynaha is doortay ee Galmudug State. Abdi Qaybdiid oo Hay''adaha Amnesty International iyo Human rights Watch ku eedeeyeen inuu gumaad iyo tacadiyo ka baxsan bini-aadamnimada kula kacay dad rayida waxaa damaciisii hogaaminta Galmudug saqiiray Madaxweynahii hore ee Galmudug Korneyl Caalin oo xilkii Madaxweynenimada ku wareejiyay Mohamud Tima kalajeex oo lagu doortay doorasho ay abaabuleen gudigii doorashada ee Madaxweyne Caalin magacaabay. Madaxweynaha cusub ee Galmudug State Dr Mohamud Tima kalajeex waa aqoonyahan ka soo shaqeeyay Bankigii dhexe ee Somalia oo Book la xiriira dhaqaalaha uu ka qoray hasse yeeshee dhinaca kale waxaa lagu tilmaami karaa ninkii sedexdii sano ee ugu dambeysay daaha gadaashiisa ka hagayay Maamulka Galmudug taas oo ka dhigan inuu markiisii horeba ka fogeyn Madaxtooyadda Galmudug State of Somalia. Galmudug oo micnaheedu yahay Maamulka Galgaduud iyo Mudug wuxuu ka tirsan yahay saxiixayaashii qariirada Nabadda Somalia ee Road Map.